Talooyin: Baadhis xariif ah ayaa muujinaya sida gabdhaha XL-ga ay u labisan karaan kalsooni - TELES RELAY
ACCUEIL » QODOBO Talooyin: Boodhka jilciya ayaa muujinaya sida gabdhaha XL-ga ay u labisan karaan kalsooni
Talooyin: Boodhka jilciya ayaa muujinaya sida gabdhaha XL-ga ay u labisan karaan kalsooni
Blogger wuxuu muujinayaa sida gabdhaha XL-ga loo labisan karo kalsooni
Maarso 30, 2019 04: 20 By Fabiosa
Fikrad buuxa, iyadoon loo eegin size - halkan waa Londoner kaas oo ku wanaagsan maqaarkeeda. Heerka dhalinyarada Ayesha Perry-Iqbal kuma jirto heer "moodooyinka quruxda badan", laakiin dad badan ayaa ku arkaa inay eegto raaxo iyo dhiirigelin!
Ciwaanka Soomaliyeed ee Ayesha Perry-Iqbal (@ayeshapi) 13 Dec 2018 ee 11: 40 PST
Ma jeceshahay, iyada oo aan loo eegin cabbirkaaga
Tusaaluhu wuxuu ku shaqeeyaa microblog halkaas oo ay soo bandhigto qurxiyo habeenkii, xafiis muuqaal, dharka iyo dharka ciyaaraha. Waxay si cad u sharraxeysaa Gabdhaha waa in ay is jeclaadaan midkasta ha ahaato inta ay le'eg tahay. Ayesha ayaa wax ka qoraysa arinkeeda iyada oo isla mar ahaantaasna calaamadaha weerarrada la ogaaday in ay weli iska indho-tiraan haweenka qiyaasta L ama wax ka badan, xisaabinta 60% ee dumarka Mareykanka ah.
Ayesha oo dhan taageereysa dhammaan gabdhaha, Ayesha waxay udhigantaa sharraxan:
Beauty waa dareen. Maaha cabbir, qaab ama midab.
Kumanaan taageerayaal ah ayaa taageeraya iyada oo jecel sheekooyinka.
1. "Ula soco kalsooni ... waxaad tahay gabar yar oo qurux badan"
Ciwaanka Soomaliyeed ee Ayesha Perry-Iqbal (@ayeshapi) 6 MAR 2019 ee 10: 48 PST
2. "Ka fajiciso jirkaaga ... uma baahnid wax"
Ciwaanka Soomaliyeed ee Ayesha Perry-Iqbal (@ayeshapi) 27 Fev 2019 ee 11: 00 PST
3. "Fiidkii weyn ee Oscar-ka. Noocyo kala duwan oo kala duwan ... kala duwanaansho qowmiyadeed !! "
Ciwaanka Soomaliyeed ee Ayesha Perry-Iqbal (@ayeshapi) 25 Fev 2019 ee 9: 10 PST
4. "Gabar gabdho ah ... waad neceb tahay !! Oo yaanay ninna u sheegin ceebta. PS Live noloshaada ugu fiican "
Ciwaanka Soomaliyeed ee Ayesha Perry-Iqbal (@ayeshapi) 8 Fev 2019 ee 12: 55 PST
5. "Haddii aan kufaraxo, roobka LA wuxuu joogsan doonaa, mana heli doonno riyadayada quruxda badan ee qoraxda!"
Ciwaanka Soomaliyeed ee Ayesha Perry-Iqbal (@ayeshapi) 16 Janv 2019 ee 9: 04 PST
Ayesha ma ku dhiirigelisay inaadan ka xishoonin curfahaaga iyo cabbirkaaga?
Si sahal ah u qabso oo u bilaash sawir leh Bixinta